Otu esi egbutu azụ: n'ulo, n'oge oyi, ụdị azu ka ọkpọọ bụ uzommeputa - Azụ - 2020
Kedu ka ị ga-esi chọọ na nkebi
Otu esi akọrọ n'oge oyi
Esi esi mee ka azu oku
Otu esi achọpụta njikere
Nri azụ a na-eji esi nri
Nyocha site na netwọk
Kedu azụ nwere ike ịmịchaa
A na-ewekarị ndị ọkụ azụ na-ebute azụ ndị ahụ ka ha kpọọ nkụ ma ọ bụ ka ha kpoo obere azụ. A naghị ejikarị ndị nnọchiteanya ukwu mee ihe maka nzube ndị a, dịka e bu n'obi kee ha ma ọ bụ mmiri. Mana nke a apụtaghị na nnukwu azụ agaghị akpọnwụ.
Naanị ime ya ga-ewe obere oge. N'okwu azu, ihicha azu a na-akppo "ime taranka." Mana nke a apụtaghị na ọ bụ naanị ebule ka ọ dị mma maka nri nri.
Ụdị azụ dị iche iche nwere ike ịmịchaa:
roach, osisi crossp na ebule;
Ị ma? Mgbe ụfọdụ, oké ifufe, ebili mmiri na-efegharị efegharị ma ọ bụ oké osimiri, na-eburu azụ azụ, na-eburu ha n'ebe dị anya, ebe mmiri na-ezo. "Mmiri mmiri ozuzo" a emeela ihe karịrị otu ugboro karịa ọtụtụ puku afọ. Onye edemede Roman bụ Pliny the Younger kọwara ihe a na narị afọ mbụ nke oge anyị.
roach na gustera;
podleschik na chekhon;
Ghọta na nkà na ụzụ nke ịkụ anwụrụ.
adịghị ọcha na ide;
perch na pike;
kpara na okpu;
Ị ma? Dịka ụmụ mmadụ, azụ chọrọ oxygen maka iku ume. Ya mere, ọ bụrụ na ezughị oxygen na mmiri, ndị bi n'ọdọ mmiri ahụ nwere ike ịnwụ na mmiri.
elu na rudd;
perch na bream.
Ụfọdụ ndị omenkà na-agbaba azụ dị ka azụ na azụ na-adịghị mma. Gourmets na-emesi obi ike na fatter bụ ihe a rụchara, ọ bụ tastier.
I nwere ike ime ka azụ ọ bụla kwụsị, ma ọ dị mkpa iburu n'uche na ụdị ọ bụla dị iche iche nwere nhụta nke onwe ya:
Azụ anụ - ndị a na-agụnye pike, perch na pike perch, nwere nri (fọrọ nke nta ka abụba abụba) anụ, na-achakarị ọcha. Nri a kporo azu sitere na udiri anumanu a abughi "ajuju nke ime mmuo", nke di nkpa. A na-eme ka nke a bụrụ eziokwu site na eziokwu ahụ bụ na abụba abụghị abụba. Pike piro nwere uto pụrụ iche, ị pụghị iji mgbagwoju anya ọzọ tụgharịa ya.
White iyak - N'ebe a, a pụrụ ịkọwa carp, bream, Guster, ide, sabrefish na ụdị ndị ọzọ. Nke a bụ ụyọkọ taranka a ma ama, site na ndị a dị iche iche, ọ na - emepụta ihe dị egwu ma dị mma nke a kwụsịrị. Ego ole bụ abụba na-adabere na oge e jidere ya na ebe a na-achọta ya. Mgbe ụfọdụ, azụ na-abụ abụba nke na, mgbe a kwụsịrị ya site na ọkpọ nkụ, ọ na-adaba abụba nke abụba.
Gobies, rotanas - Ndi oru ugbo adighi akwado umu a maka isi nri taranki. Anụ ha na-atọ ụtọ, ma na usoro ịsacha obere azụ na-adị nnọọ ala nke na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịhapụ anụ ahụ na akpụkpọ anụ.
A ghaghị icheta na azụ dị egwu na-ala n'iyi ruo ogologo oge, na n'ọdịnihu ọ na-abaghị uru ma gharakwa echekwa ya ogologo oge. N'oge nchekwa nwere ike ịnweta uto na-adighi nma na isi nke abụba aji. A pụrụ ịmị mkpụrụ dị iche iche, ma na obere obere, na nchekwa nchekwa oge, ọ ka mma ịhọrọ ụdị ịba ụda maka ihicha.
Eleghi anya ị ga-enwe mmasị ịgụ banyere otu esi amị mkpụrụ osisi, ahịhịa na ahịhịa na ụlọ.
Ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ dịka ejidere azụ (ezubere maka ihicha) iji gbanwee akwụkwọ na stalks nke nettle ochie na-etinye ebe dị jụụ ruo awa ole na ole, wee gaa n'ihu salting ya. Nettle ga-echebe azụ site na mbibi na ụbọchị ọkụ.
A gaghị enwe nnukwu anụ nwụrụ anwụ (ruo 500 g) na-enweghị nnu ma ọ bụrụ na ọ gutting. A na-eme nke a iji hụ na anụ azu jupụtara na subcutaneous na esịtidem na abụba. N'ime ozu azụ na-eru ihe karịrị gram 500, a na-ekpochapụ oghere abdominal si viscera, ọ bụrụ na azụ ahụ na caviar, mgbe ahụ, a na-etinye àkwá ahụ n'ime afọ.
N'oge okpomọkụ, na-atụgharị azụ niile (nnukwu na obere), n'ihi na n'oge okpomọkụ, anụ ụlọ azụ niile na-azụ na algae. A na-agụnye elu mmiri ọbụna na nri nke ụdị azụ azụ.
Ọ bụrụ na ọ dị ọhụrụ, ejide anụ ahụ adịghị ekpochapụ oghere abdominal site na algae, mgbe ahụ, ọ na-amalite decompose arụsi ọrụ ike n'ime awa ole na ole, nke ga-eme ka anụ ahụ rie nri na-ekwesịghị ekwesị maka oriri mmadụ.
Ọ dị mkpa! Azu ọ bụla a na-ekpochabeghị bụ isi iyi nke ọrịa ma ọ bụ nje. A ghaghị icheta na azụ azụ a na-ekpo ọkụ na-adị mma, naanị ma ọ bụrụ na ọ na-eji salite izu abụọ tupu anwụrụ anwụrụ.
Oge ọnwụ nke nje na azụ na-eru ka 2 n'arọ mgbe salting na 20% saline brine:
onye na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na okpomọkụ nke + 15 Celsius C ... + 16 Celsius C - site na ụbọchị 9;
oyi salting na + 5 Celsius C ... + 6 Celsius C - si 13 ụbọchị;
onye nnochite anya mmiri na-ekpo ọkụ (ọ bụghị gutted) - site na ụbọchị 13;
onye nnochite anya mmiri ala (gutted) - site na ụbọchị 12.
N'okpuru nkenke, a ga-akọwa usoro nchịkọta dị ka ndị a:
Ezi nnu ala, di ka "Extra", adighi adi nma maka ebumnuche ndia, o di nma karia nnu di uku. Mmetụta nke salting na nnu nnu - nke nwere ike ịmalite eriri anụ ahụ na azụ anụ ahụ, nke na-egbochi brine ahụ n'ime n'ime. E nwere ụzọ abụọ iji salite azụ: salting salting na iji brine.
A na-eme nri na brine:
Ị nwere ike iburu akpa nke kwesịrị ekwesị (nri plastic plastic, metal), ma ọ bụrụhaala na mgbidi ya adịghị oxidize. Maka nzube ndị a, ihe ndị dị na galvanized na plastik teknụzụ adịghị adabara.
A kwadebere ozu na-etinye ya na akpa, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na n'ọtụtụ ahịrị.
N'okwu ikpeazụ, a na-etinye mkpuchi nke mmegbu ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịchara, a na-elezi brine, nke na-asọba na tank, wụsara yok. Tuzluk na-agbanye ruo mgbe ọ na-ekpuchi ihe mkpuchi nke dị ntakịrị sentimita karịa azụ.
Mgbe ọ bụla a na-etinye salting n'elu yok ahụ, ọ dị mkpa ka ejide azụ na brine na-egbochi ime ụlọ nke ikuku nke nje bacteria nwere ike ịmalite.
Video: salting azụ na brine Enwere ike ịhọrọ ya site na ntụgharị ụzọ, a pụkwara ime osisi. Osisi osisi ga-abụ onye ọkụ azụ ruo ọtụtụ afọ. A na-atụ aro ka ịhọrọ maka nzube a osisi nke na-adịghị ebunye tannins ma ọ bụ resin (aspen, linden).
Eleghi anya ị ga-enwe mmasị ịgụ banyere otu esi esi esi nri.
Nri a brine:
Maka lita 3 mmiri, otu iko na otu ọkara (250 ml) nke nnu ntanye ka agbakwunyere.
Ọ bụrụ na achọrọ brine karị, ọnụ ọgụgụ dị elu na-abawanye.
A na-agbaze nnu kpamkpam n'ime mmiri ma ọ bụ naanị mgbe nke a gasịrị, a na-awụsịa azụ ahụ n'okpuru nkedo.
Ụfọdụ ndị na-ahụ n'anya na-agbanye shuga ruo n'ókè, na-arụ ụka na ọ na-eme ka anụ ahụ nwekwuo nro. N'okwu a, otu pasent shuga na-agbakwunye kilogram nke nnu.
Ọ bụrụ na ịchọrọ nnu azụ na azụ, ị nwere ike iji akpa nke polyethylene. Iji mee nke a, gwuo oghere n'ime bushes (ọ bụghị n'ebe anwụ na-acha) ma wụnye obere akpa n'ebe ahụ iji jide azụ. A na-ejiri olu na-emeghe olu nke akpa ahụ. Na nnu nnu abara n'elu mmegbu ma wunye brine.
Onye nnochite anya oyi:
N'okwu a, ị nwere ike nnu nnu n'ime nkata, igbe nke osisi ma ọ bụ akpa ọ bụla, nke dị na ala nke nwere oghere maka nnwale nke mmiri.
A na-ekpuchi ala nke ite (nkata, drawer). Maka nke a kwesịrị ekwesị burlap ma ọ bụ owu.
Na usoro salting azụ ga-ahapụ mmiri mmiri nke ga-asọba n'ime oghere na oghere nke tank maka salting.
Ị ma? Ndị ọkụ azụ nwere ahụmahụ n'ọhịa na-efe azụ azụ na akpa. Mgbe e liri ha n'ala n'ala mita. A na-ahapụ azụ ahụ n'enweghị ihe mgbochi, mmiri oyi anaghịkwa ekwe ka ọ kwata.
Dịka ntụziaka, ntaneti kwesịrị ịdịru ihe dị ka awa 12. Ndị ọkachamara na-ekwenye na ọ dị mkpa ịkwanye nnu salted dị ka ọ dị na brine. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na a kụrụ ozu maka ụbọchị atọ, mgbe ahụ, ọ ga-adịkwa na mmiri dị ọcha, ma ọ dịkarịa ala ụbọchị atọ. Kwa 5-6 awa mmiri na-ekpuchi mmiri, ọ na-achọsi ike ịgbanwe.
Igwe ihe na-eme ka ihicha ihe dị mkpa, mgbe ị tụchara, kpọgide ozu ahụ maka ihicha. Ruo ugbu a, esemokwu nke ndị ọkachamara na usoro ahụ na-akwado echiche ha, otu esi tuchi azụ azu, adalata.
E nwere ụzọ abụọ a ga - esi kwenye:
A na-egbu azụ site ọdụ - maka nke a, a na-eme oghere n'ime pulp nke ọdụ ahụ na mma nke n'ime ntan nke waya ahụ. Ejiri eriri na ejiri eriri na eriri ọnụ maka nghọta. N'ime ozu nke a, mmiri na-enweghị isi na-esi n'ọnụ ọnụ apụta, nke pụtara na ọdịnaya nke afọ ga-asọpụkwa n'ọnụ ya (anụ ahụ agaghị atọ ụtọ).
Ị ma? Salmon, igwu mmiri n'elu osimiri, na-alaghachi azụ n'osimiri ebe a mụrụ ya. Ịlaghachi n'ụlọ, salmon nwere ike igwu mmiri karịa puku kilomita atọ n'ọnwa abụọ.
A na-ahapụ isi na azụ - n'ihi na a na-esi eriri anya ahụ gafee ụdọ a. Ndị na-agbaso ụzọ a na-egosi na abụba dị n'ime ya agaghị ahapụ ozu ma na-etinye obi n'ime anụ n'oge usoro ihicha. Tinyere abụba, anụ ahụ ga-ejupụta na bile, nke ga-enye taranka oke obi ilu, nke ndị na-ahụ n'anya biya.
Kedu ihe a ga-atụgide na ebe akọrọ
Maka itinye ọnụ iji eriri dị mkpa nke ihe ndị e kere eke (na akwa abụọ ma ọ bụ atọ) ma ọ bụ waya nchara. Ọdịnihu na-eme ka ọ na-atụgharị anya na oghere anya ka ọ ghara ịbanye na kọntaktị mgbe ị na-ehicha onwe ya. N'ụzọ dị otú a, a pụrụ ịdọrọ anụ ahụ ise n'otu eriri.
Ụdị taranka ndị dị otú ahụ na-adabere na ihe a na-etinye n'ime ebe dịtụ. Ụfọdụ ndị na-akụ azụ na-ahọrọ ịkọpụta ahihia ọdịnihu maka awa 3-5 n'ime anyanwụ ka ha kpọọ nkụ, mgbe nke ahụ gasịrị, ha na-ebugharị ebe ikuku na ikuku. Ọ bụ ifufe na-enyere akọrọ ozuzu ngwa ngwa. Na ihu igwe dị mma, ụbọchị atọ ma ọ bụ ise zuru ezu maka ihichacha zuru ezu.
Ọ bụrụ na ihu igwe adịghị adabara (oyi na mmiri), mgbe ahụ, nnukwu azụ ga-egbutu afọ ma tinye ọtụtụ mkpara ndị dị n'ime ya. Ụlọ elu ahụ (na-emeghe site na windo) zuru oke dị ka ebe maka ihicha azụ. Ulo kachasị mma maka ihicha azụ bụ + 18C ... + 20C. Ị nwere ike kpọgidere azụ maka ịsacha n'oge dị iche iche, nke a bụ ihe uto:
Ụfọdụ na-ahọrọ ịkọwa ya na abalị, na-arụ ụka na akpụkpọ azụ nke anụ azụ nke akpọnwụwo n'abalị ga-abụ ihe na-adighi adọrọ mmasị na ụfụ.
Ndị ọzọ na-akọrọ naanị n'ụbọchị, na ihu igwe dị mma, na-ezobe "ihicha" n'ime ụlọ maka abalị ahụ. Ha na-akọwa ya n'ebe ahụ, na mgbe ụtụtụ na ehihie na-ada, taranka na-aghọ ntụ oyi ma tụfuo ya.
Ma ndị ọzọ, kama nke ahụ, gbalịa ịkwalite mmalite nke ịgwọ ọrịa na mmiri ozuzo, na-azọrọ na azụ a, ọ bụ ezie na ọ na-egbutu oge, bụ juicier na tastier.
Na-alụ ọgụ ijiji
Iguzogide ụmụ ahụhụ n'oge ihicha, e nwere ọtụtụ ụzọ:
Mgbe a na-ekpocha ozu ahụ, a na-asacha ya na mmiri na mmanya. Maka lita 10, tinye 6 tablespoons nke mmanya. Ụfọdụ na-ahọrọ ka a na-egwu azụ na mmiri mmanya a maka oge ise ma ọ bụ 10. Isi ísì mmanya na - eme ka ụmụ ahụhụ kwụsị, ma n'otu oge ahụ, ọ na - eweda ụda nke taranka.
A na-ejikwa mmanụ mmanụ na-agụnye isi azụ.
A na-eji osisi galik egwunye.
A na-ekpuchi ozu ndị na-ekpuchi n'anwụ na-ekpuchi ya ka ụmụ ahụhụ wee ghara ịchọta ebe ọ bụ na ha adịghị enweta n'ime. Enwere ike ịchọta ihe mgbochi na mmanya (9%) site na iji karama ma ọ bụ akwụkwọ a na-etinye na galik a tụrụ n'ọtụtụ ebe - nke a agaghị emetụta uto azụ azụ.
A na-ekpocha ozu ndị nwere ude mmanụ pụrụ iche na ijiji (mmanya 9% na mmanụ sunflower na 1: 3). Azụ na-ezere ísì ísì ụtọ, ma ghara ịnọdụ ala na mmanụ na-adighi ala.
Ị ma? Nnukwu azụ kachasị n'ụwa bụ nnukwu anụ shark, nke nwere ike ịmalite ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ elu ụlọ akwụkwọ abụọ. Ọ nwere ihe karịrị puku ezé anọ (3 mm), na-eru ihe dị ka tọn 25 ma na-azụkarị na plankton.
Video: ịlụ ọgụ megide ijiji mgbe ị na-ehicha azụ
Azụ azụ n'oge oyi dị mkpa maka otu teknụzụ dị ka n'oge okpomọkụ. Nanị ihe isi ike dị na usoro ihicha. Ke ini etuep, iyak n̄ko ama ọsọn̄ọ, edi enye ọyọfiọk nditiene ke ndutịm ke ndaeyo.
Iji gee anu ahu a na-etinye na loggia na-ekpo ọkụ. Iji mepụta ọkụ, windo ihu ihu na windo mepee ntakịrị. I nwekwara ike ihicha n'ime ụlọ ahụ, ma ọ bụrụ na ndị nwe ya dị njikere ịnagide isi ísì.
Ọ dị mkpa! N'ọnọdụ ọ bụla, ọ gaghị ekwe omume ikpo azụ n'oge oyi site n'enyemaka nke arụnyere na nso ihe ọkụkụ ma ọ bụ nso batrị ahụ. Ihe na-eme n'ihi nke a "jụọ" enweghi ihe oriri.
Dị ka uzommeputa a, ị nwere ike ime ka a mịrị amị nri ọ bụla (ọ bụghị oke oke) anuoriri. Maka okpu a, perch, obe osisi crucian, obere obere osisi ma ọ bụ obere obere akpa ọlaọcha ga-eme. Maka isi nri, jiri oven na nri nri.
A na-ejide ya ma saa ya, wee kpochaa na-eji akwa akwa kichin.
Anụ ahụ n'ime na n'èzí na-ete akwụkwọ nnu nnu, ose oji na mmiri akwukwo akwukwo.
Azụ kwesịrị n'okpuru yok ma hapụ ya maka awa 48 maka salting.
Mgbe ụbọchị abụọ gasịrị, a na-asa ahụ anụ ahụ nnu, tinye ya maka awa abụọ ma ọ bụ atọ na mmiri dị ọcha wee kpochapụ akọrọ na akwa akwa ma ọ bụ akwa akwa.
Video: azu na-ehicha ọkụ Nri:
Ejiri oven na + 40C.
A na-eji akọrọ (nke a na-etinye na nnu ma tinye ya) n'otu eriri na mpempe akwụkwọ na-ekpuchi ya. A na-eduzi isi ozu ndị e debere na mpempe akwụkwọ na-echekwa otu akụkụ.
A na-etinye tray mmiri na oven. Eku oku na-anọgide na-ajar site na 5-10 cm.
Ya mere, azụ a kwụsịrị maka awa 2. A na-echekwa okpomọkụ na oven na + 40C. Mgbe oge achọrọ gafere, a na-ewepụta akwụkwọ mpempe ọkụ ma kpuchie ya.
A na-etinye azụ azụ mmiri na oven maka 3-4 ọzọ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ozu ndị ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ na-eru ma tụnyere ụdọ ma ọ bụ waya.
A na-agbanye kukan maka ịsacha ikuku. Ebe ahụ dị jụụ na ikuku.
N'ime ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ, a kwadebere azụ site na oven.
Nzuzo nke nri zuru oke:
Maka ịsacha na oven, ọ ka mma iji azụ na-ejighị mmanu (roach, vobla ma ọ bụ crucian).
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ozu buru ibu, mechaa gbanye ya n'azụ ya (nke a ga-akwado ma mee ngwa ngwa).
Ka ị ghara imegbu onwe gị site n'iji ụdọ na-eriri eriri anya, jiri mpempe akwụkwọ (na-eme nko site na ya).
Maka nchekwa ogologo oge nke azụ azu tupu etinye ya na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ polyethylene nke e ji mmanụ olive mee.
Ị ma? Na Japan, anụ ugbo na-eri ewu na-egbu egbu. Ngwunye ya nwere nsị egbu egbu - tetrodotoxin. Iji bụrụ onye ruru eru ịkwadebe efere anụcha, onye na-eri nri ga-enweta akwụkwọ akwụkwọ sitere na ụlọ akwụkwọ pụrụ iche nke na-akụzi nkuzi nke azụ a.
Tupu ojiji, a ghaghị ịlele ngwaahịa ahụ maka njikere na àgwà:
Ọ bụrụ na usoro nchịcha ahụ agwụla, usoro anụ ahụ na-aghọgharị, ọ dịghị nnu a na-ahụ anya n'elu anụ ahụ.
Ọ bụrụ na taranka doro anya na akọrọ, ọnọdụ ahụ nwere ike idozi ya site n'itinye azụ ahụ na ákwà mgbochi mmiri, na-ekpuchi ya ma na-ezipụ ya n'otu ntabi anya na okpuru ulo ma ọ bụ friji. N'ụtụtụ, anụ a mịrị amị ga-abụ nke dị nro ma na-agbanwe.
Azu azu a na-adabere na ọkara (isi ruo ọdụ). Ọ bụrụ na taranka laghachiri na mbido mbụ ya ma bụrụ mmiri, ọ pụtara na ọ dị njikere maka ojiji.
Ọ dị mkpa! Azu azu nwere ezigbo uto o choro inye. Ya mere, a na-ewepụta ngwaahịa ahụ site na ihicha ihe na ripening (2-3 izu). Iji mee nke a, họrọ ebe dị jụụ na drafts (maka ikuku ventilati ọma).
Mkpụrụ osisi snoo (dry salting)
Enwere ike ihichapu carp nke viscera, wee kwọchaa nke ọma.
Kwadebe ihe mkpuchi ma ọ bụ plastic nke kwesịrị ekwesị.
Na-ekpuchi ala pelvis na akwa ntanye nke nnu nchara (1 cm).
Tupu etinye ihe azu a na pelvis, a na-awụnye onye ọ bụla nnu n'okpuru nsị. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-etinye iyak ahụ na nnukwu oyi akwa.
Debe akwa akwa mbụ n'elu nke ọma fesa ya na nnu.
Ọ bụrụ na a ka nwere azụ, mgbe ahụ, a ga-etinye ala nke abụọ na nke ọ bụla dị n'otu n'otu ụzọ ahụ.
A na-ejikarị nnu fesa n'elu akuku (ikpeazụ).
N'elu nnu, a na-emegbu mmegbu nke a na-etinye ibu ahụ. Ihe mkpuchi site na ịwụ ma ọ bụ pan, na obere dayameta dị ntakịrị karịa dayameta nke efere ahụ, ga-adabara dịka yoke. В качестве груза можно использовать пятилитровую пластиковую бутылку наполненную водой и установленную поверх перевернутой крышки.
Тазик с засолёнными тушками устанавливается в прохладном месте (холодильнике или погребе). N'oge a na-ekpo ahịhịa, azu osisi ga-emepụta ihe ọṅụṅụ, nke nwere ike ibili n'elu mkpuchi n'okpuru yok, ihe ọṅụṅụ a adịghị mkpa iji kpoo.
Nnukwu ụgbọala ga-abụ nnu n'ime ụbọchị atọ, ụbọchị abụọ ga-ezuru ụmụaka.
A na-ewepụ ozu ndị a na-edozi ahụ na brine, na-asacha nke ọma ma debe ya maka ọkara ụbọchị n'ụbọchị oyi, mmiri a na-ejighị mmiri na-emetụ ya, mgbe nke ahụ gasịrị, a na-etinye ya na ya ruo mgbe ọ ga-akọrọ. N'ime 5-6 ụbọchị, a na-akwadebe ebe a na-awụlị.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume nsị nnu n'ụzọ dị otú a, ebe ọ na-ewe nnu dị ka ọ chọrọ. Na usoro nke ịmalite mmiri ahụ ga-ewepụ nnu nnu ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ọ bụla, azụghị azụ na brine maka ụbọchị 3, nke ahụ dị mma, ma ọ ga-ewe oge dị ntakịrị iji mee ka ọ bụrụ mmiri dị ọcha (ihe dị ka otu ụbọchị).
Kpoo ebule ahụ (nnu na brine) Anyị na-eburu ebulu nke ọtụtụ nha, ma na-erughị ọkara kilogram. Maka ntakịrị azụ kwesịrị ekwesị salting.
Anyị na-eme ka ike dị ike:
Na nnukwu liter mmiri oyi, tinye 150-180 g nke nnu. A kpaliri ngwọta ahụ ruo mgbe nnu na-agbaze kpamkpam n'ime mmiri.
A na-enyocha ike brine na-eji akwa àkwá, na brine kwesịrị ekwesị ka àkwá ahụ ghara ihicha, kama ọ na-ese n'elu.
A na-etinye Ram (ọ bụghị a gut) na nnukwu ahịrị.
Nkume ndị ahụ a na-agbadata na-agbada n'elu site na yok ka azụ wee ghara ịfụgharị mgbe ejuputa na brine.
N'elu yok wụsara brine.
Tuzluka zuru oke mgbe ọ na-ekpuchi azụ na obere protruding n'elu yok (2-3 cm).
Enwere ike iji salting gaa ebe dị jụụ, ma hapụ ụbọchị atọ na anọ maka salting.
A na-ewepụta azụ azu site na brine ma tinye ya maka ịmalite. Maka obere ebule ọ ga-ezuru ya maka ọkara otu awa, ma maka nnukwu ọ na-ewe 4 ruo 6 awa.
Iche na ihicha ebulu ahụ:
N'iji usoro ịzụta mmiri na-agbanwe ọtụtụ ugboro iji kpochapụ. Tupu mmiri mbụ gbanwere mmiri, a ga-ewepụ ebule ahụ gbasiri ike na mmiri ma gbasaa na tebụl. E kwesịrị ikwe ka anụ dinara ala n'ime ikuku ọhụrụ, nke a ga - enyere aka na-ekesa nnu na anụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ntaneti kwesịrị ịnọgide.
Ná ngwụsị nke ebulu ahụ na-agbapụta aka na-apụ na-agbanye na ndo na a gbara.
Na anụ anụ anụ ahụ gwụrụ ga-enweta agba amba ma ghọọ uzo uzo.
Ngwakọta pike (akọrọ salting):
A na-asa pike (na oyi na-enweghị gutting), na anụ ahụ na-eme n'akụkụ abụọ site na 2-3 transverse ngalaba.
Ewere ike na ala kwesịrị ekwesị (a ga-eburu pike kpamkpam na ala).
A wụsara nnu na ala nke osisi na-atụ bọl (oyi akwa kwesịrị ịdịkarịa ala cm ise na ise).
A na-etinye pike na nnu nnu ma na-efesa ya na nnu.
Ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ azụ, ha na-atụkwasị n'elu ibe ha, oge ọ bụla na-etinye nnu.
N'elu elu pike, a na-awụnye ntanụ ikpeazụ nke nnu ma tinye mkpuchi ya na akwu.
Ọ bụrụ na a na-ahụ nnukwu pike, a na-etinye akpa ahụ n'ebe dị jụụ maka awa 48. Ọ bụrụ na azụ dị obere, awa 24 zuru.
A na-asacha pike na-ehicha ọkụ ma na-ehichapụ ya n'ime ihe a ga-asacha ruo mgbe ọ dị njikere.
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-ehicha pike, ihe kachasị mkpa bụ ka ị ghara ịhapụ oge ọ ga-adị njikere. Ọ bụrụ na ị tụfuru ntakịrị, mgbe ahụ, kama ị ga-enweta anụ a mịrị amị na-enweta ngwaahịa a mịrị amị. Pike piro bụ nri dị mma biya.
Ndị ọkụ azụ nwere ahụmahụ na-azọrọ na ebe nchekwa echekwara azụ na-eto eto ma bụrụ naanị mma.
Akwụsịre ya na ebe dị oyi ma na-egbu ọkụ, na akpa nke anụ ahụ.
E tinyere ya na nkata site na willow branches na ihe mkpuchi. Kwatuo nkata a ga-eguzo n'elu ihe a na-eche na ebe dị jụụ (ọ bụghị n'anyanwụ).
Na kichin kichin - na-ejikarị na plastik, akpụkpọ anụ, ihe oriri ma ọ bụ ihe nkiri.
Ọ dịghị ihe ọ bụla siri ike na nkwadebe nke azụ a mịrị amị, ọ dị mfe maka ndị ọkụ azụ nwere ahụmahụ na ndị bidoro ịnagide nke a. Ọ dị mma ịsị na ọbụna onye mbido ga-azụ azụ n'oge mbụ. Ị nwere ike na-emeso ndị ezinụlọ gị na ndị enyi gị ihe oriri a, n'ihi na aka gị aka ya, ọ ga-aba ụba karịa ịzụrụ ya.
Ana m agbasi mgba ike. Nanị mee nnu nnu na mmiri na steeti, ruo mgbe mmanụ ọkụkọ na-adanye na ya. Enwere m azụ buru ibu, ma anaghị m ata obere azụ. M na-atụba azụ ahụ n'ime ihe ngwọta nke abalị (ma ọ bụ maka ụbọchị dum) (awa 8-10), n'ụtụtụ, m na-atụgide ya na ala. Enweghi ada. Na azụ anaghị arụ ọrụ mara mma.
Ude si MUH "
Maka iko 1 nke mmanya anyị na-ewe 3 volumes of oilflower oil, mix and lubricate with this "Provensace" eyịride iyak. Uji anaghị anọdụ ala na butter ma gbanye n'ekpere gburugburu taranka, ọ bụrụ na ihe ọ bụla e kere eke ka na-anọdụ - echegbula onwe ya banyere àkwá, ọ gaghị akwụsị! Nanị ihe nzaghachi nke mmanụ a bụ na mgbe otu ọnwa gasịrị, taranka amalite "nchara," mana uto na-emeziwanye. Otu ude dị mma maka sunburns, ma ọ ka mma itinye ya na ndị ikom (ndị inyom anaghị aghọta na ahụike dị oke ọnụ karịa echiche nke ndị ọzọ) Nri salting (maka ichebe) A na-etinye akwa ákwà ọcha ma ọ bụ ákwà iru uju na ala nke nkata ma ọ bụ igbe osisi. etinye ya na nnukwu ohia, isi na ọdụ, afọ na fesa ya na nnu. Nnu nnu zuru ezu dị kilogram 1.5 na kilogram 10 nke azụ. N'elu azụ ahụ, a na-akụpu ya na mkpuchi osisi - na yok dị arọ. , t Ọ na-egbochi ịmepụta ikuku nke ikuku nke nje bacteria nwere ike ịmalite, na, ọzọ, na-eme ka anụ azụ buru ibu karị. Mgbe obere oge gasịrị, a na-ewepụta mmiri site na azụ ahụ, ọ na-asọpụ n'etiti oghere nkata ma ọ bụ mbadamba igbe. ụbọchị a na-azụ azụ ahụ. N'oge a, ọ ga - abụ ebe dị jụụ (refrjiraeto, okpuru ulo). PS Mgbe anyị na - agbapụta mmiri nke North River, anyị ji nnu salting azụ (grayling na lenok): A na - eme salting ọ bụla 40-60 nkeji nke ịkụ - a kpochara anu ọ bụla site na akpịrịkpa ebipụ Ma ndị isi, e meghere ozu ahụ n'azụ, asachasị ya nke mere na ọ dịghị ọbara ọgbụgba na-agbapụta azụ, mgbe ahụ, a na-ekpuchi ozu ahụ dum na nnu nnukwu nkume ma tinye ya na mkpuchi ya na obere oghere, kwa mgbede ọ dị mkpa ka ịgbanwuo ike na mkpuchi ala ka ka salting na-apụ, ebe nnu nnu adịghị abawanye, azụ adịghị adaba, anụ ahụ ka na-agbanwe ma dị ụtọ.
Enwere ọtụtụ ntụziaka maka salted na azụ a mịrị amị, ọtụtụ ndị na-ahụkarị na ndị nwe nwere onwe ha, ụzọ kacha mma. Agbalịrị m ọtụtụ ihe, ebe a ka m chere na ọ kacha mma. Banyere ụzọ mbụ, agụrụ m akwụkwọ akụkọ na-achụ nta nke Russia afọ ole na ole gara aga (ahaghị onye edemede ahụ, ọ dị mwute ikwu na ọ dịghị echekwa ya). Nanị, o were ma depụtaghachi ihe nchịkọta site na akwụkwọ akụkọ ahụ, mgbe ahụ mgbe obere oge gasịrị, ọ gbalịrị, o mere nke ọma. Ọ bụghịkwa ihe ijuanya, usoro nhazi nke ọgwụgwọ bụ Volga, ebe, ọ bụrụ na ọ bụghị n'ebe ahụ, ọ kachasị mma ịmara otú e si esi azụ azụ! A pụrụ ịhụ azụ a gwụrụ nke ọma, ozugbo, nnu enweghị nnu, enweghi abụba, n'ime ya nile, azu ahụ na-enweta nnu nke ọma, nke na-atọ ụtọ ma ghara ire ere. Ya mere, nhazi mbụ bụ Volga. A na-etinye azụ ahụ na njikere ịrụ ọrụ ma na-echekwa na okpuru ulo. Ozugbo oyi malitere, na ụbọchị akọrọ oyi na-acha, a na-etinye azụ ahụ na nnu nnu ma tinye ya na garlands n'okporo ámá, wilted. Nke ahụ bụ ihe nzuzo dum! Enweghị ijiji, anụ ahụ dị n'ime ya adịghị adaba na okpomọkụ, mmiri ahụ na-ekpochapụkwa na oyi (freezes). Ntụziaka nke abụọ bụ Aldan. E nwere obodo dị otú ahụ na North, site na ebe ahụ ka a na-eme uzommeputa. Ihe bụ na na North, a na-egbu azụ kpamkpam na opisthorchiasis. Ọ bụrụ na ị nọ na ngwọta siri ike nke nnu maka izu abụọ (maka opisthorchiasis ka ọ nwụọ), mgbe ahụ, ị ​​ga-enweta azụ nke na-adịghị tee mmanụ, ọ bụghị teecha. Ya mere, ndi mmadu biara na uzo di otua. Anyị na-eche frosts, ịkụ azụ, nnu na nnu. Ahụmahụ ga-abịa nke nta nke nta, ị ga-amụta itinye nnu. A na-eduzi m site na uzommeputa maka herring azụ azụ. Azụ anụ dị n'okpuru ibu ahụ, mgbe otu ụbọchị, anyị na azụ ahụ na-esi na ntu oyi ma chere izu abụọ. Izu abụọ mgbe e mesịrị, opisthorchosis nwụrụ, a na-akụkwa azụ ahụ (ma ọ bụ na ọ dị ka ihe ruru unyi), anyị na-agbanye ya ọzọ na oyi. Ọ bụ ezie na salted na ya, na poteto - ụtọ. Jiri ma ntụziaka mee ihe mgbe niile! Dị ka onye nnọchiteanya Aldan si kwuo, azụ ahụ na-agbanye ike, anụ ahụ adịghị atọpụ. Dị ka Volga si kwuo, ị nwere ike nnu na ndaeyo, nke mere na ọ bụrụ na oyi adịghị na azụmahịa anyị azụ - nke ọma, ọ dịghị ihe ọ bụla!